Reer Cadaado oo cod-dheer ku qaadacay hadalkii Kheyre ee gogosha Dhuusamareeeb. – Shabakadda Somalibile Media
Reer Cadaado oo cod-dheer ku qaadacay hadalkii Kheyre ee gogosha Dhuusamareeeb.
Kullan aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen qeybaha kala duwan bulshada sida Odayaasha, waxgaradka, Aqoonyahanada, Culumaa’udiinka iyo siyaasiyiinta Cadaado ayaa waxa ay cod-dheer ku muujiyeen inay ka horjeedaan hadalkii sida ka fiirsasho la’aanta Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ku iclaamiyey in gogosha shirka dib u heshiisiinta Galmudug iyo doorashooyinkaba lagu dhigo magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud.
Odayaasha ayaa ku tilmaamay hadalkaas mid uusan Ra’iisul Wasaaraha ka fiirsan oo uu ku fududaaday isla markaana uu dhinac maray wada hadal ay ku yeesheen magaalada Cadaado, iyagoo ku tilmaamay hadal la iska yiri in magaalada Dhuusamareeb lagu qabto shirka dib u heshiinta.
“Inagu Dhuusamareeb ma diidanin oo waa dadkeena, laakiin dad dhibaato ku hayay deegaankaas iyo deegaanada ku xeeran oo muddo sideed sano iyo dheeraad go’doon ugu jiray ma aqbali doono in halkaas shir dib u heshiisiineed lagu qabto aan ka qeyb galno” waxaa sidaa yiri mid ka mid ah odayaashii hadalada ka jeediyey kullankaasi.
Dhammaan waxgaradkii ka hadlay ayaa ku dhaliilay Ra’iisul Wasaare Kheyre go’aankiisa ah in shirka dib u heshiisinta lagu qabto magaalada Dhuusamareeb, balse eedeemaha uu wajahayo Kheyre ayaa uu mujinaya sida uu ugu guuldareystay qorshahiisa ku aadaanaa arrimaha maamul u samaynta gobolka Mudug kadib ceyrintii Xaaf.
Si kastaba ha ahaatee Ra’iisul Wasaare Kheyre oo ah nin galaan gal badan ayaa rajo ka qabay safarkiisa gobolka Mudug balse hadda waxaa u muuqda inuu sii kala fogeynayo beelaha walaaha ah ee wada daga gobolka Mudug, kuwaasoo maamul dhibaatooyin fara badan laga soo maray isku keenistiisay ku dhistay maamul goboleedka Galmudug, hase yeeshee ay muuqanayso inay ku baxayso gacanta dowladda federaalka Soomaaliya ee ay kala hogaamiyaan Farmaajo iyo Kheyre oo labaduba heshiis ku ah burburinta maamul goboleedyada dalka.